१० वर्षको उमेरमा यस्तो विचार, जस्को भनाईले बनायो सबैलाई बनायो चकित! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > १० वर्षको उमेरमा यस्तो विचार, जस्को भनाईले बनायो सबैलाई बनायो चकित! (भिडियो सहित)
१० वर्षको उमेरमा यस्तो विचार, जस्को भनाईले बनायो सबैलाई बनायो चकित! (भिडियो सहित)
admin December 13, 2020 December 13, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाचार	0
बुटवल । प्रतिभा सबैमा हुन्छ । फरक यति मात्र होकी प्रतिभालाई कसैले प्रस्फुटन गराउँदछ त कसैले गराउँदैन । साथै कसैको प्रतिभा निश्चित परिधिमा केन्द्रित हुन्छ त कसैले प्रतिभाले विश्व समेटेको हुन्छ । कसैले आफ्नो प्रतिभालाई सानैमा चिनेर सबै सामू पस्कन्छन् त कसैलाई आफु भित्र भएको प्रतिभा चिन्नै जुनि लाग्दछ । कसैले चिनेर पनि चुपचाप बसि दिन्छन् भने कसैले समय बितेपछि मात्र चिन्दछन् । जस्ले अवसरहरु गुमाई सकेका हुन्छन् ।
बुटवलमा यति बेला १० वर्षकी एउटी नानीले खुलेरै आफ्ना कुरा राखेकी छन् । उनको कुराले उनलाई यो उमेरमै पनि यस्ता कुराको ज्ञान भएकी र त्यसमा पनि आफ्ना विचारलाई सामाज नै छक्क पर्नेगरी पस्कन सकेकी भनेर अहिले सबैले उनले वाककला भएकी सानी नानीको उपमा दिएका छन् ।
उनले एउटा भिडियोमा जातिय छुवाछुतको कुरालाई उठाएकी छन् । उनले यो २१ सेन्चुरीमा पनि जातिय विभेद घटनुको साटो झनै बढ्दै गएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले मानिस मानिस सबै एउटै हौं तर पनि किन यहाँ जातका नाममा मानिसले मानिसलाई नै विभेद गरिएको होला भन्दै सबैलाई खुलेरै अनि प्रष्ट रुपमा प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्,‘के अस्पतालमा कोही बाहुन बिरामीलाई रगत चाहियो भने त्यो बिरामीको आफन्तले मलाई दमाई कामीको रगत नदिनुस् है भनेर भन्छ ?’ उनले अगाडी भनिन्,‘मलाई मेरी आमाले पिउनलाई दिएको पानी र दमाई वा कामीले पिउनलाई दिएको पानीको स्वादमा के फरक छ र ?’
बर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण सोमवार लाग्दै, ६ ग्रहलाई हुन्छ यस्तो असर, अवस्य जान्नुहाेस्